Ciidamada DKMG ee Gobolka Gedo oo Luuq ka fuliyay Howlgalo dadlagu qabqabtay – SBC
Ciidamada DKMG ee Gobolka Gedo oo Luuq ka fuliyay Howlgalo dadlagu qabqabtay
Ciidamada Maamulka DKMG ah ee Soomaaliya ee ku sugan Degmada Luuq ee Gobolka Gedo ayaa mudooyinkii la soo dhaafay deegaankaasi waxa ay ka wadeen Howlgalo lagu baacsanayo kooxo Burcad ah oo xiliyada habeenkii ah dhac ka geysta Degmada Luuq iyo deegaano hoos yimaada.
Taliyaha ciidanka qeybta degmada Luuq ee gobolka Gedo DKMG ah ayaa u sheegay Xafiiska SBC ee Gobolkaasi in howlgalo baaxad leh oo ay sameeyeen ay ku soo qabteen kooxahaasi Burcad ah isagoona tilmaamay in 4 ka mid ah kooxahaasi ay iminka ku xiran yihiin sldhiga .
Waxa kale oo uu xusay Taliyuhu in howlgalada ciidamada DKMG ah ay qeyb ka ahaateen Howlgalo miino baaris ah oo ay ciidamo loo tababaray ka wadeen deegaanka .
Maxamed Cabdi Kaliil gudoomiyaha DKMG ah ee gobolka Gedo ayaa isna sheegay in howlgalada ay ciidamada ka wadaan gobolka ay yihiin kuwo amaanka lagu sugayo isagoona faah faahin ka bixiyay kooxo burcad ah oo dadka waxyeeleeya oo ay ciidamadu soo qabqabteen.
Beryihii ugu dambeeyay aya waxaa soo baxaysay cabashooyinka ay dadka degmada Luuq iyo kuwa dega deegaanada ka agdhow ku muujinayeen kooxo burcad ah oo xiliyada habeenkii ah u gala wadooyinka iyo luuqyada guryahooda kuwaas oo ka qaata wax alaala waxa ay gacanta ku sitaan sida Mobils-ka, Lacagaha iyo, agabka kale ee ay Haweenku xirtaan sida Dahabka iyo waxyaabo la mid ah.